ကြက်အတောင်ပံကိုဘာလို့မစားသင့်လဲ ဘာတွေဆိုးကျိူးပေးနိုင်လဲ – BaHuTuTa
November 15, 2020 admin Food, Health 0
အလှအပကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မမ….တို့ရေ…ကြက်တောင်ပံကြော်ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ့် အန ္တရ ာယ်တခုဆိုတာကို မျှဝေလိုက်တာပါ….ဒါကတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတမီးတဦးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးပါ။မကြာသေးမီက အမျိုးတမီး တယောက် သူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်တည်သလိုလို အခဲတခု ဖြစ်ပြီး ကြီးကြီးလာတာကြောင့်
ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်….အဲဒီအခဲဟာ ခွဲစိတ်ပြိးကြည့်လိုက်တော့ မဲပုပ်နေတဲ့သွေးခဲကြီးပါတဲ့….သူမကတော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာပေါ့…ဒါပေမယ့်.. သူထင်တာနဲ့တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါ့တယ်…ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့….
ဒုက္ခပါပဲနော်…သူလဲ အရမ်း စိတ် သောကရောက်ရတာပေါ့….ဒါနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူ တယောက်ဆီ ချက်ချင်းသွားပြကြည့်တော့…ဆရာဝန်က သူမကို မေးခွန်းတခုမေးတယ်….မေးခွန်းက သူမအတွက်ေတော်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်…..ကြက်တောင်ပံကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသလား ….တဲံ့….သူမက…စားပါတယ် လို့ပဲဖြေတယ်…စားလဲ စားတာကိုး….သူမ ကြက်တောင်ပံကြော်အမြဲတမ်းစားနေကျဆိုတာ ဘယ်လိုသိပါသလဲလို့ တောင်အံ့သြတကြီးပြန်မေး မိသေးတယ်…..ကဲကြည့်…ဘာကြောင့်သူဒီလိုရောဂါဖြစ်တာလဲ…ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကြက်တွေ မြန်မြန်ကြီးထွားလာစေဖို Steroids ဟိုမုန်းတွေပါတဲ့ကြီးထွားဆေးတွေ သုံးလာကြပါတယ်….Steroids ဟိုမုန်းတွေပါတဲ့ ကြီးထွားဆေးကို ကြက်တွေရဲ့.တောင်ပံနဲ့ လည်ပင်းနေရာတွေမှာ ပဲ အမြဲထိုးပေးလေ့ရှိတယ်..
ဒါကြောင့် Steroids ဟိုမုန်းတွေအများဆုံးစုနေတဲ့နေရာကတော့တောင်ပံနဲ့လည်ပင်းတွေမှာပါပဲ….ဒီ Steroids ဟိုမုန်းတွေဟာ မြန်မြန်ကြီးထွားစေတတ်တဲ့သဘောကြောင့် ….ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့….ဒါဟာဘာအတွက်လဲ….တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်က … ကြက်တွေမြန်မြန်ကြီးထွားလာစေဖို့ပဲမဟုတ်လား….ဒါပေမယ့်….အခု အမျိုးသမီးတွေကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်လာပါပြီ….အမျိုးသမီးတွေမှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ မ.ဟော်မုန်းတွေကိုပါ အန္တရာယ် ကျရောက်စေတဲ့အပြင်….
ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို မဲပုပ်နေတဲ့ အခဲတွေ ကြီးထွားလာစေတတ်တဲ့ ရောဂါတမျိုး ပိုပြီးဖြစ်လွယ်လာစေပါတယ်…အမျိုးသမီးတို့မှာ အရသာရှိလှတဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာေတွေ ရှိကြတာပေါ့နော်….ဒါပေမယ့်….အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးက အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ရာ ပိုပြီးိအရေးကြီးပါတယ်…ဒါကြောင့် မမတို့ုကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်….မမတို့ခန္ဒာကိုယ် အလှမပျက်ရအောင် ….ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလဲ ထိန်းရာရောက်အောင် ကြက်တောင်ပံ ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် စားသုံးခြင်းက နေ တတ်နိုင်သလောက် လျှော့စားကြပါလို့…အခြား မမ .တွေ.. (မမ.ရှိသူတွေ) ဆီကိုလဲ ဒါကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါဦးနော်…..။ခင်မင်စွာဖြင့်….Ng_h0^^_y3!N